How Can You Know When You Are Pregnant? - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
All Articlesကျန်းမာရေး( က )ကျန်းမာရေး( က-အ )ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့်မိခင် ကျန်းမာရေးမိခင်နှင့်ကလေးကျန်းမာရေး
How Can You Know When You Are Pregnant?
ကိုယ်ဝန်ရှိလျှင်ဘာတွေပြောင်းလဲ လာမယ်ဆိုတာ သိလိုပါသလား? မိန်းမသားတစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်လက္ခဏာပြခြင်း မတူနိုင်ပါ။ အကြောင်းရင်းမှာ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းမတူသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။သို့သော် ပြလေ့ပြထရှိသော ကိုယ်ဝန်ဆောင်လက္ခဏာ များကို အောက်တွင်လေ့လာနိုင်ပါသည်။
(၁) ရင်သားများ တင်း၍နာလာခြင်း
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အစောပိုင်းလက္ခဏာများတွင် ရင်သားများ တင်း၍ နာခြင်းပါဝင်ပါသည်။ နို့သီးခေါင်းပတ်လည် အမဲကွင်းမှာ ပို၍ ကြီးလာခြင်း၊ပိုမဲလာခြင်း၊ တွေ့ရတတ်ပါသည်။ progestrone ဟော်မုန်းတက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်အချို့မှာ ခေါင်းမူးခြင်း တစ်ခါတစ်ရံ မေ့လဲခြင်းတို့ဖြစ်တတ်ပြီး အကြောင်းရင်းမှာ ဟော်မုန်းပြောင်းခြင်း သွေးပေါင်ကျခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်
ပျို့အန်ခြင်းမှာ တစ်နေကုန်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း အများအားဖြင့် မနက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်တတ်ပါသည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တိုင်းမဖြစ်တတ်ပါ။အကြောင်းရင်းအတိအကျမရှိသော်လည်း ဟော်မုန်းကြောင့်ဟု ယူဆနိုင်သည် ၁၂ပတ် ၁၆ပတ်ကျော်လျှင်သက်သာသွားတတ်သည။် ရေသောက်ခြင်း၊ အသားဓာတ်စားခြင်း၊ နည်းနည်းနှင့်မကြာခဏစားခြင်းတို့ဖြင့် သက်သာစေနိုင်သည်
ကိုယ်ဝန်ပထမ ၃လတွင် အချို့အစားအစာ အနံ့များ၊ အရသာများကို မခံနိုင်ဘဲ အစားအသောက်ပျက်တတ်ပါသည်။
၆ပတ် ၈ပတ်တွင် စဖြစ်တတ်သည်။ ကျောက်ကပ်ပို အလုပ်လုပ်သည့်အပြင် သားအိမ်မှ ဆီးအိမ်ကိုဖိမိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ဒါ သဘာဝဖြစ်ပါသည်။ စိတ်ပူရန်မလိုပါ။
ဗိုက်အောင့်ခြင်း သွေးအနည်းငယ် ရာသီလာချိန်မဟုတ်ဘဲ ဆင်းခြင်းက သန္တေအောင်မျိုးဥ ဆင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဒါ့အပြင် အဖြူဆင်းခြင်းလည်း ရှိနိုင်ပါသည်။ တခါတရံ အဖြူအနည်းငယ်ဆင်းခြင်းဟာ ကိုယ်ဝန်တောက်လျှောက်ရှိနေတတ်ပြီး စိတ်ပူရန်မလိုပါ အနံ့နံခြင်း၊ယားယံခြင်းရှိမှသာ ဆရာဝန်နှင့်ဆွေးနွေးပါ
ရာသီမလာရခြင်းအဓိကအကြောင်းမှာ ကိုယ်ဝန်ရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော်လည်း အခြားအကြောင်းများလည်းရှိပါသည်။ အခြားအကြောင်းများမှာ ရုတ်တရက် ပိန်ခြင်း၊ဝခြင်း၊ ပင်ပန်းခြင်း၊စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း၊ ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်
Progestrone ဟော်မုန်း မြင့်တက်လာခြင်းကြောင့် ရင်သားတင်းခြင်းအပြင် ကိုယ်ဝန်ပထမ ၃လတွင် မောပန်း နွမ်းနယ်ခြင်းပါ ခံစားရတတ်ပါသည်။ဒါကြောင့်များများနားရန်လိုအပ်ပါသည်
ကိုယ်တွင်းဟော်မုန်း ပမာဏပြောင်းလဲခြင်းကြောင့် အပြင် စိတ်ဖိစီးမှုများကြောင့် စိတ်အတက်အကျမြန်တတ်ပါသည်။ ပထမ ၃လ နှင့် မီးဖွားခါနီး ၃လတွင်အဓိက ခံစားရတတ်ပါသည်။
အချုပ်အားဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်အများစုသည် ဖော်ပြပါ လက္ခဏာတစ်မျိုး သို့ နှစ်မျိုးခံစားရတတ်သည်